१. कमिशनकै लागि चीनमा समेत प्रतिबन्धित भिटिएम २ करोड ७२ लाखमा स्वाथ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
२. स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेको सामान किन काम नलाग्ने भयो ? अहिले उपचारमा जे प्रयोग भइरहेको छ, ती सबै अनुदानमा आएका सामान हुन् । सरकार र प्रशासनको दयनीय अवस्था हो यो ।
३. अख्तियारको कार्यक्षेत्रबारे
निजीक्षेत्रलाई पनि अख्तियारले छानबिन गर्नसक्ने गरी कार्यक्षेत्र बढाउन सरकार अघि सरेको छ ।
यो खबरले निजीक्षेत्र आतंकित हुनथालेको छ । अव अनावश्यक रुपमा अख्तियार धाउनु पर्ने भयो, अख्तियारले दिनुसम्म दुःख दिन्छ, नेपालमा कारोवार गर्न नसकिने भयो भन्ने अभिव्यक्ति निजीक्षेत्रले दिइरहेको छ ।
साविक कानुनमा संविधानको धारा २९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथिमात्र अख्तियारले छानबिन गर्नसक्ने क्षेत्र किटानी भएको भए पनि अव निजीक्षेत्र पनि अख्तियारको कार्यसीमाभित्र पारियो भने निजीक्षेत्रलाई अनुसन्धानका नाममा दिनुसम्म दुःख दिने निश्चित छ । गोपनीयताको मौलिक हक कायम भए पनि अव कानुन बनाएर कुनै पनि व्यक्तिको फोन टेपिङ गर्न सकिने बनाइँदैछ । सरकार संविधान, संवैधानिक शासन र लोकतन्त्र माथि निरंकूशता लाद्दैछ र जनताको स्वास्थ्योपचारमा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरिरहेको छैन भन्ने उदाहरण हुन् यी । तैपनि सरकार भन्छ– जनताका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ ।
१० अर्व खर्च भयो भन्नासाथ जनता सडकमा उत्रिए । इनफ इज इनफ भन्ने नारा र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जनता कहाँ खर्च भयो १० अर्व भनेर हिसाव माँगिरहेका छन् । सरकारको भनाइमा जनता विश्वस्त छैनन् । सरकारप्रति जनता अविश्वास गरिरहेका छन् र सडकबाट सरकारको राजीनामासमेत माँगिरहेका छन् । सरकारले जनविश्वास गुमाएको स्थिति हो यो ।
देखाउनका लागि पूर्ण बहुमत, दुईतिहाइको सरकार हो यो । यस्तो सरकारले राजनीतिक स्थिरता र विकासमा बाँकटे हानेर समृद्धि र सुखानुभूति दिनुपर्ने हो । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको भय मेटाउन, उपचारमा सरलता ल्याउन र लोककल्याणकारी नीति अपनाएर व्यवहार देखाउन यो सरकार पूर्णत असफल भइसक्यो ।
मानव सभ्यता रहने कि नरहने, कोरोनाको कहरले को बाँच्ने, को मर्ने भन्नेजस्तो अनिश्चित अवस्थामा समेत मन्त्री र प्रशासनका पदाधिकारीहरु कमिशनका लागि मरिहत्ते गरिरहेछन् । र, यस्तो आतंकित स्थितिमा निजीक्षेत्रमाथि अख्तियारको लगाम कस्ने अर्को आतंक फैलाएर सरकारले आफ्नो घुँडामा आफै बन्चरो हान्दैछ । यस्तो सरकारका विरुद्धमा आमनागरिक सडकमा छन्, निजी क्षेत्रका व्यवसायी पनि सडकमा आउनेवाला छन् । यो सरकारले मुलुकलाई अराजक बनाउँदैछ ।